ရန်ကုန် နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း မှလွှဲပြီး ကျန် တိုင်းဒေသများ မိုးရွာသွန်းမည် …. – Na Pann San
Na Pann San W | May 12, 2020 | Weather | No Comments
မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာ နဲ့ ဒီကနေ့ မေ ၁၂ ရက် ညနေပိုင်းအထိ ခန့်မှန်းချက်များ အရ တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အများစု မှာ မိုးရွာသွန်းဖို့ ရှိတယ်လို့ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ကယား ပြည်နယ်မှာနေရာ စိပ်စိပ် ၊ မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီး နဲ့ ရှမ်းပြည် နယ်(မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)တွေ မှာတော့ နေရာ ကျဲကျဲ ရွာသွန်းဖို့ ရှိတယ် လို့ဆို ပါတယ် ။
ရန်ကုန် နှင့် ဧရာဝတီ မှလွှဲပြီး ကျန် တိုင်းဒေသများ မိုးရွာသွန်းမည် ….
နေပြည်တော် ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်တွေမှာတော့ နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာဖို့ ရှိတယ်လို့ မိုး / ဇလ က အသိပေးထုတ်ပြန်ထား ပါ တယ် ။ ဒီကနေ့ ညနေအထိ မိုးရွာသွန်းမယ့် ဒေသတွေထဲ မှာ ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီ တိုင်းတော့ မပါဘူးလို့ သိရပါတယ်။
‘ ‘ မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းကို မေ ၆ ကနေ ၂၁ ရက်အတွင်းမုတ်သုံဝင်မယ် လို့ ခန့်မှန်းထားတယ် ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသကတော့ တောင်ပိုင်းထက်ပိုနောက် ကျမယ်။ ရန်ကုန်အပါအဝင် မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေ က ပင်လယ်ကရေငွေ့ ပါတဲ့လေတွေကြောင့် ပူအိုက်တဲ့ဒဏ်ကို ပိုပြီးခံရနိုင်တယ်။ ဒီဒဏ်ကြောင့် ခုခံ အားကျနိုင်တဲ့အတွက် အသက်ကြီးပိုင်းတွေအနေနဲ့ သတိထားဖို့ လိုတယ်’’လို့ မုတ်သုံဝင်ရောက်မယ့် အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်ချိုချိုရှိန်က ဘီဘီစီကို ပြောထားပါတယ်။
မိုးလဝေသနဲ့ ဇလဗဒေညှနျကွားမှုဦးစီးဌာ နဲ့ ဒီကနေ့ မေ ၁၂ ရကျ ညနပေိုငျးအထိ ခနျ့မှနျးခကျြမြားအရ တိုငျးနဲ့ ပွညျနယျ အမြားစု မှာ မိုးရှာသှနျးဖို့ရှိတယျလို့ အသိပေးထုတျပွနျထားပါတယျ။ ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)၊ ကယား ပွညျနယျမှာနရော စိပျစိပျ ၊ မန်တလေး တိုငျး ဒသေကွီးနဲ့ ရှမျးပွညျ နယျ(မွောကျပိုငျးနှငျ့ အရှပေို့ငျး)တှမှောတော့ နရောကြဲကြဲ ရှာသှနျးဖို့ရှိတယျ လို့ဆိုပါတယျ။
ရနျကုနျ နှငျ့ ဧရာဝတီ မှလှဲပွီး ကနျြ တိုငျးဒသေမြား မိုးရှာသှနျးမညျ ….
နပွေညျတျော ၊ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျး ဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ကခငျြပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနဲ့ မှနျပွညျနယျတှမှောတော့ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာဖို့ ရှိတယျလို့ မိုး / ဇလ က အသိပေးထုတျပွနျထား ပါ တယျ ။ ဒီကနေ့ ညနအေထိ မိုးရှာသှနျးမယျ့ ဒသေတှထေဲ မှာ ရနျကုနျတိုငျးနဲ့ ဧရာဝတီ တိုငျးတော့ မပါဘူးလို့ သိရပါတယျ။
‘ ‘ မွနျမာနိုငျငံ တောငျပိုငျးကို မေ ၆ ကနေ ၂၁ ရကျအတှငျးမုတျသုံဝငျမယျ လို့ ခနျ့မှနျးထားတယျ ။ မွဈဝကြှနျးပျေါဒသေကတော့ တောငျပိုငျးထကျပိုနောကျ ကမြယျ။ ရနျကုနျအပါအဝငျ မွဈဝကြှနျးပျေါဒသေတှေ က ပငျလယျကရငှေေ့ ပါတဲ့လတှေကွေောငျ့ ပူအိုကျတဲ့ဒဏျကို ပိုပွီးခံရနိုငျတယျ။ ဒီဒဏျကွောငျ့ ခုခံ အားကနြိုငျတဲ့အတှကျ အသကျကွီးပိုငျးတှအေနနေဲ့ သတိထားဖို့ လိုတယျ’’လို့ မုတျသုံဝငျရောကျမယျ့ အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီး မိုးလဝေသနဲ့ ဇလဗဒေ ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာန ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဒျေါခငျခြိုခြိုရှိနျက ဘီဘီစီကို ပွောထားပါတယျ။